निर्मला हत्याको प्रमाण खोज्ने अर्को प्रयास पनि असफल,एसपी पुत्रले पार्टी गरेको होटलको सिसिटिभी फुटेज रिकभर भएन :: PahiloPost
निर्मला हत्याको प्रमाण खोज्ने अर्को प्रयास पनि असफल,एसपी पुत्रले पार्टी गरेको होटलको सिसिटिभी फुटेज रिकभर भएन
7th October 2018, 04:59 pm | २१ असोज २०७५
काठमाडौँ : निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रमाणको खोजीमा जुटिरहेको प्रहरीले सिसिटिभी क्यामेराबाट केही ‘क्ल्यु’ पाउन सक्ने आशा राखेको थियो। तर सिसिटिभी क्यामेराको हार्डडिस्क ‘रिकभर’ नभएपछि यो प्रयास पनि असफल हुन पुगेको छ।
भीमदत्त नगरपालिका अन्तर्गत घटनास्थल र शंकास्पद गएको होटल ओपेरा वरपर राखिएका १७ वटा क्यामरामध्ये केही फुटाइएको, केही बन्द भएको देखिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेपछि प्रहरीको ध्यान सिसिटिभीतिर जान बाध्य गएको थियो। तर जतिबेला प्रहरीको ध्यान सिसिटिभीतिर गयो, त्यतिबेलासम्म त्यसले खिचेका दृश्य हार्डडिस्कबाट मेटिइसकेका थिए।
कानुनमा तीन महिनासम्मको दृश्य सुरक्षित राख्नुापर्ने प्रावधान भए पनि ती सिसिटिभीका हार्डडिस्कमा १५ दिनसम्मको दृश्य मात्र संग्रह हुन्थ्यो।
घटना साउन १० गते भएको थियो। तर प्रहरी भने सिसिटिभी फुटेज खोज्दै त्यसको एक महिनापछि मात्र पुगेको थियो।
मेटिइसके पनि पुराना दृश्य रिकभर गर्न सकिने झिनो आशा बाँकी थियो। त्यसैले प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरबाट हार्ड डिस्क मगायो। तर प्रहरी स्रोतका अनुसार हार्ड डिस्क रिकभर गर्ने प्रयास असफल भएको छ।
कञ्चपनुर जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी कुबेरबहादुर कठायतले हार्ड डिस्क रिकभर नभएको पुष्टि गरे। एसपी कठायतले पहिलोपोस्टलाई भने, 'हामीलाई अहिलेसम्म रिकभर नभएको भन्ने जानकारी आएको छ। तर पत्र र हार्डडिस्क भने प्राप्त भएको छैन।'
हार्ड डिस्क रिकभर गर्न विदेशबाट एक्सपर्ट टिम मगाइएको थियो। यो टिमले समेत रिकभर गर्न नसकेको प्रहरी स्रोतको दावी छ।
घटनामा शङ्का लागेर डिएनए परीक्षण गराइएका तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्टका छोरा किरणले घटना भएको दिन ओपेरा होटेलमा पार्टी दिएका थिए। घटनास्थलबाट करिब ३ किलोमिटरको दूरीमा रहेको होटेलमा त्यस दिन के भएको थियो? को-को उपस्थित थिए? होटलमा एसपी विष्टपुत्र कति समयदेखि कति समयसम्म रहेका थिए? के निर्मला पनि त्यहाँ पुगेकी थिइन्? अहिले प्रहरी अनुसन्धानको लागि यी तथ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देखिएको छ।
स्थानीय बासिन्दाले औँला ठड्याएका एसपी विष्टसहित तीनै जनाको डिएनए परीक्षण गर्दा उनीहरुको डिएनए निर्मला पन्तको भेजिनल स्वाबमा भेटिएको पुरुष वीर्यको डिएनएएसँग नमिलेको रिपोर्ट सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसैगरी प्रहरीले अभियुक्त दावी गरी सार्वजनिक गरेका दीलिपसिंह विष्टको पनि डिएनए मिलेको थिएन।
निर्मला प्रकरण : एसपीपुत्रले पार्टी गरेको होटेलको सिसिटिभी फुटेज नियम विपरीत मेटियो, कारबाही गर्ने तयारी
निर्मला हत्याको प्रमाण खोज्ने अर्को प्रयास पनि असफल,एसपी पुत्रले पार्टी गरेको होटलको सिसिटिभी फुटेज रिकभर भएन को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।